सञ्चार सिद्धान्तको आँखामा केपी ओलीको अद्भुत भाषणकला – Aggrani News
शुक्रबार, माघ ०२, २०७७ ५:५१:५७
विवादै छैन– नेपालमा सर्वाधिक प्रभावशाली वक्ता–भाषणकर्ता केपी शर्मा ओली नै हो । उहाँको अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, ज्ञान र बौद्धिकताको विरोधीहरुले पनि तारिफ नगरी सुखै छैन ।
नेपाली नेताहरुमध्ये केपी ओलीको सञ्चार शैलीले सबैलाई प्रभावित गरेको मान्न सकिन्छ । ओलीमा भएको सञ्चारको विशिष्ट गुणले आम मानिस बीच उहाँका अन्तर्वार्ता र भाषण लोकप्रिय भएका हुन् । ओलीको सञ्चार क्षमता कति माथिल्लो कोटीको छ भने उहाँले मातृभाषा बाहेक अन्य भाषामा दिएका अभिव्यक्ति समेत प्रभावकारी ठहरिएका छन् । हालै उहाँले एउटा भारतीय मिडियालाई हिन्दी र अर्काेलाई अंग्रेजीमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो । ग्रैह्र नेपाली भाषामा दिइएका ती दुई अन्तर्वार्ताबाट नेपालको जनसमाज अत्याधिक प्रभावित भएको इन्टरेनट आधारित सामाजिक सञ्जाल हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
केपी ओलीको सञ्चार शैली किन प्रभावकारी छ त ? यस विषयमा निम्न बुँदा राखौं :–
केपी ओलीले भाषण या अन्र्तवार्तामा बोल्नुहुँदा स्रोता दर्शकले के भन्न खोजेको बुझिएन भनेर गुनासोे गर्दैनन्् । जे भन्न खोजेको हो स्पष्ट शब्दमा भन्नुहुन्छ ।
बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले ओलीको अभिव्यक्ति छर्लङग बुझ्छन् । हिमालदेखि तराईसम्मकाले बुझ्छन् । जुनसुकै उमेर र पेसावर्गकाले पनि बुझ्छन्, किसान मजदूले पनि बुझ्छन् । जस्तो कि : १८ पुष, २०७७ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले नयाँ खालको उपमा प्रयोग गर्नुभयो । ‘जसको गोठ उसको पुच्छर बाहिर ?’ पार्टी विभाजनको यो बेला यस्तो उपमाको अर्थ नबुझ्ने को होला र ?
मैले माथि आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको परीक्षाको प्रश्नको चर्चा गरेको थिएँ । अहिले परीक्षा दिनुपर्‍याे र सोही प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने भयो भने केपी ओलीको अभिव्यक्ति शैलीको ब्याख्या गर्ने थिएँ । र, अन्त्यमा लेख्ने थिएँ– नेताको भाषण र सञ्चारकला केपी ओलीको जस्तो हुनुपर्छ ।
सनराईज खवरवाट ।